Citizenship Saint Lucia - Tetikasa tena trano - tokana
Citizenship St Lucia - Tetikasa tena trano - tokana
Citizenship Saint Lucia - Tetikasa momba ny fananana trano fonenana - mpangataka tokana
Citizenship Saint Lucia - Tetikasa tena trano
Ny kabinetran'ny minisitra Kabinetra dia handinika ireo tetik'asa tena ilaina mba hampidirina amin'ny lisitra nankatoavina ho an'ny programa momba ny fampindramam-pirenena. Ny tetik'asa ankatoavina nankatoavina dia latsaka amin'ny sokajy roa lehibe:
Hotely faranana avo sy trano fandraisam-bahiny
Toeram-pisakafoanana mangarahara avo lenta
Raha efa nekena, ny tetik'asa trano dia azo alaina amin'ny famatsiam-bola mendrika avy amin'ireo mpangataka zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ny mpangataka dia takiana hanatanteraka fifanarahana fividianana mividy sy varotra ho an'ny fampiasam-bola amin'ny tetik'asa trano efa nankatoavina. Ny famatsiam-bola, mitovy amin'ny vidin'ny fividianana nifanekena, dia apetraka amin'ny kaonty escrow azo ekena izay tantanin'ny mpanamboatra sy ny Citizenship by Investment Unit any Saint Lucia.
Raha vao nekena ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny tetik'asa iray dia ilaina ny famatsiana ambany indrindra:
Mpangataka Mainty: 300,000 XNUMX dolara amerikana
Miverina amin'ny maha-olom-pirenena an'i Saint Lucia